Jamie Carragher Iyo Gary Neville Oo Isku Dhacay Iyagoo Si Toos Ah U Tabinaya Ciyaartii Arsenal Iyo Manchester United – Latest Sports News
Jamie Carragher Iyo Gary Neville Oo Isku Dhacay Iyagoo Si Toos Ah U Tabinaya Ciyaartii Arsenal Iyo Manchester United
Telefishanka Sky Sports ayaa xalay laga diiwaangeliyey dhacdo yaab leh kaddib markii ay isku dhaceen Jamie Carragher iyo Gary Neville oo si wada jir ah uga hadlayey ciyaartii Arsenal ay 2-0 kaga adkaatay Manchester United ee garoonka Emirates Stadium.
Jamie Carragher iyo Gary Neville ayuu isku af-dhaafay mar ay faallaynayeen goolkii koowaad ee Arsenal oo Granit Xhaka uu meel fog kubadda kaga ganay, isla markaana dhinac qaldan u dirtay goohaye David de Gea.
Gary Neville oo hore ugu ciyaari jiray Manchester United, kabtanna kasoo noqday ayaa sheegay in goolhayaha Manchester United uu qalad sameeyey, isla markaana ay ahayd inuu qabto kubadda Xhaka kusoo toogtay goolka uu waardiyaha ka ahaa, hase yeeshee Carragher ayaa kaga aragti duwanaaday qodobkaas, waxaana uu tilmaamay in aan si buuxda loogu eedayn karin goolhayaha.
Neville oo hadalka ku horreeyey ayaa yidhi: “Waxay ila tahay in David de Gea uu sameeyey qalad weyn, sidaas daraadeed ayay Manchester United ugu guul-darraysatay ciyaarta. Xaqiiqaduna waxay tahay in goolkaa dartii ay qaybta dambe ugu ciyaarayeen weerar rogaal-celis ah.”
Dave Jones oo ahaa ninka daadihinayey barnaamijka ayaa weydiiyey Charragher: “Jamie aad looma hubo sow maaha, adigu ma hubtaa?”
Intii aanu Jamie Carragher hadalka qaadanin ayaa waxa si degdeg ah ugu soo laabtay doodda Neville oo hadalka boobay, waxaanu yidhi: “Ma garanayo sababta aanu u hubin (Jamie Carragher). Waxay ka gashay badhtamaha goolka iyadoo laga soo ganay meel 30 yard ah. Xattaa maaha in laga doodo.”
Carragher ayaa markaas kaddib jawaabtiisii qaatay, waxaanu yidhi: “Sababma, qof kastaa ma fikirkaaga ayuu aaminsan yahay?”
Neville oo cadho ka muuqato ayaa hadalka qaatay, waxaanu yidhi: “Haddii kubaddu badhtamaha ka gasho shabaqa iyadoo ka timid meel 30 yard ah, maba aha in laga doodo.”
Arrinta oo markaas u muuqatay inay kululaatay ayaa waxa hadlay Carragher oo yidhi: “Badhtamaha kama gelin shabaqa. Kubaddu way ka leexatay, wayna ka fogeyd.”
Jamie Carragher iyo Gary Neville oo wejiyadoodu isbeddeleen ayaa sii waday muranka, waxaana kusoo laabtay Neville oo yidhi: “David de Gea waa mid ka mid ah goolhayeyaasha dunida ugu wanaagsan, laakiin wuxuu sameeyey khalad. Waa intaas uun. Waana in lagu tilmaamo khalad goolhaye”
Carragher ayaa haddana hadalka qaatay, waxaanu yidhi: “Laakiin intee ayay le’eg tahay inta ay dhinaca kale u leexatay (kubaddu)?”
Doodda ayaa sii socotay in muddo ah, waxaanay markii dambe u gudubtay jamaahiirta oo baraha bulshada ku wadaagay, iyagoo ku kala qaybsan in goolhaye David de Gea uu kubbadaas khalad ku lahaa iyo in kale, balse Carragher iyo Neville ayaa ugu dambayn doodda uu dhinac kale ugu leexiyey daadihiyaha barnaamijka Dave Jones oo dejiyey murankoodii.